Dowladda Soomaaliya saddex bilood ayay u qabatay UN-ka - BBC News Somali
Dowladda Soomaaliya saddex bilood ayay u qabatay UN-ka
4 Abriil 2011
Image caption Ra'iisal wasaaraha Soomaalia
Shir jaraa'id oo magaalada Muqdisho uu ku qabtay, ra'iisal wasaare Maxamed Cabdullaahi, waxaa uu ku sheegay in xukuumaddiisu muddo saddex bilood ah u qabanayso hay'adaha Qaramada Midoobay ee Nairobi deggan inay u soo guuraan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho haddii kale tallaabo xagga wada shaqeynta ah laga qaadi doono.
hadalka uu ku dhawaaqay ra'iisal wasaaraha Soomaaliya waxaa lagu yiri ' xukuumadda Federaalka Ku-meel-gaarka ah waxey hubtaa in aysan danta ummadda Soomaaliyeed ku jirin in Nayroobi ay sii joogaan hay’adaha loogu talo galay inay u adeegaan bulshada Soomaaliyeed. Soo guurista hay’adaha QM ee Muqdisho waxey wax badan ka beddeli doontaa xaaladda guud sida amniga, abuurista shaqada, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka guud oo ay bulshadu si weyn ugu baahantahay'.
'Mar haddii marar badan ay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Ban Ki-Moon, iyo Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM, Augustine Mahiga, ay sheegeen inay ka go’antahay in dhammaan hay’adaha QM ay u soo guuraan Muqdisho, waxaa la joogaa waqtiga laga dhabeyn lahaa ballan qaadyadaas. DFKMG ah waxey ka codsaneysaa QM inay arrinkan siiyaan muhiimadda uu leeyahay oo ay muddada 90ka maalmood gudahood ugu soo guuraan caasimadda Soomaaliya' ayuu sheegay ra'iisal wasaaruhu.
Waa markii ugu horreysay ee hay'adaha caalamiga ah sidan oo kale loola hadlo muddo 20 sano ka badan inkastoo muddadaasi ay jireen cabashooyin fara badan oo ku saabsan joogitaankooda magaalada Nairobi oo lagu eedeeyo inay ku bixiyaan dhaqaale badan oo loogu talo galay in lagu gargaaro dadka Soomaaliya oo ay haystaan dhibaatooyin ka dhashay colaad iyo abaaro isbiirsaday.